Ọ bụrụ na ị na-atụle Njikọ Ndị Ahịa oge-oge site na nyocha akparamagwa olu .... Martech Zone
Fraịdee, Nọvemba 20, 2015 Douglas Karr
Anyị dere banyere mkpa oge nzaghachi na ohere gị ahịa ma ọ bụ ndị ahịa ọrụ otu ịzaghachi… na-atụle àgwà nke nzaghachi ha dị ka nke ọma. Gịnị ma ọ bụrụ na ị pụrụ n’ezie ịtụ mmetụta nke mkparịta ụka gị na ndị ahịa gị? Ọ ga-ekwe omume Mkparịta ụka Cogito.
Mkparịta ụka Cogito na-eme ka ọrụ ndị ahịa na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ site na ịme ha ezigbo nduzi omume. Cogito Njikọ aka na-enye ebumnuche na ntụkwasị obi dị mma na 100% nke mmekọrịta ekwentị ahọrọ ụlọ ọrụ nwere na ndị ahịa ya.
Chegodi inwe ike ichota nkụda mmụọ ma ọ bụ afọ ojuju na ezigbo oge ka ị na-agwa onye nwere olile anya ma ọ bụ onye ahịa okwu! Nke a bụ nkwa nke omume nchịkọta dị ka Cogito. Omume Cogito nchịkọta teknụzụ sitere na nyocha site na MIT Media Lab ma ha egosila na ha dị irè site n'ọtụtụ ntinye azụmahịa.
Olu mmadu - Nnukwu data nchịkọta etinyere site na algorithms nke onwe ya na-enye ike nyocha nyocha nke akara olu
Real-Time - Ahụmịhe nke onye ọrụ na-eduzi onye nnọchi anya ka ọ gbanwee usoro ha ka ọ daba na mmasị ndị ahịa
Akara - Cogito Engagement Scores ™ na-enye njikwa ihe ebumnuche doro anya nke arụmọrụ na mmekọrịta mmekọrịta
Amụma - Nghọta ewepụtara na mmekọrịta ọ bụla na-agwa ndị ahịa ọ bụla na ndị nnọchi anya ha nwere ike ịme ọzọ
Results - basedgwé ojii dabeere, kensinammuo iji na enweghị nkebi mwekota na ẹdude CRM na telephony usoro accelerates oge uru
Cogito na-enye ezigbo ndị na-anọchite anya ndị na-ahụ maka ndị ahịa ọrụ nduzi akparamàgwà oge, na-enyere ha aka imeziwanye usoro nkwukọrịta ha, ebe ha na ndị ahịa ha na-enwe mmekọrịta ntụkwasị obi karị. Cogito sọftụwia na-ewepụta nghọta ozugbo na ebumnuche n'ime ọkwa nke ndị ahịa maka mmekọrịta ọ bụla nke ekwentị. Nke a na-enye ndị ọkachamara ekwentị aka ka ha nyefee ahụmịhe ndị ahịa na-elebara anya nke ukwuu, nke na-emeziwanye ma ọrụ ma ọrụ arụmọrụ dị mma.
Tags: omumenyocha omumeoghomkparịta ụka cogitoNdị ọrụ nlekọta ndị ahịaolunyocha oluolunyocha olu